တန်ဖိုးနည်း၊ တန်ဖိုးသင့်အိမ်ရာ မဲပေါက်ထားသူများ ကနဦးပေးသွင်းငွေ သွင်းထားပြီးသည်မှာ လေးလ? - Yangon Media Group
တန်ဖိုးနည်း၊ တန်ဖိုးသင့်အိမ်ရာ မဲပေါက်ထားသူများ ကနဦးပေးသွင်းငွေ သွင်းထားပြီးသည်မှာ လေးလ?
တန်ဖိုးနည်း၊ တန်ဖိုးသင့် အိမ်ရာမဲပေါက်ထားသူများ ကနဦးပေးသွင်းငွေသွင်းထားပြီးသည်မှာ လေးလခန့် ကြာမြင့်လာပြီဖြစ်သော်လည်း ယခုထိအခန်းလက်ဝယ်မရရှိသေးဘဲ အိမ်ရာသတ်မှတ်ဈေးနည်းသည်ဟုဆိုကာ မဲပေါက်ပြည်သူများစိတ် မရှည်ဘဲ ကနဦးပေးသွင်းငွေများ ပြန်ထုတ်ယူသည်အထိ သက်ဆိုင်ရာက စောင့်ဆိုင်းနေသည်ဆိုသည့် သတင်းများထွက်ပေါ်လာမှုကြောင့် အိမ်ရာမဲပေါက်ပြည်သူအချို့က စိုးရိမ်မှုများရှိနေကြကြောင်းသိရသည်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှဦးစီးကာ မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့ ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနနှင့် ဆောက်လုပ် ရေးနှင့်အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်တို့ ပူးပေါင်းပြီး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသ ကြီးအစိုးရအဖွဲ့ အိမ်ရာစီမံကိန်းများရောင်းချရေးကြီးကြပ်မှုကော်မတီက အဆိုပါအစီအစဉ်ကို အ ကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ရောင်းချပေးမည့်တန်ဖိုးနည်း၊ တန်ဖိုးသင့်အိမ်ရာများမှာ ဒဂုံ မြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)မြို့နယ်ရှိ အင်းဝအိမ်ရာ၊ ကောင်းစံသာအိမ် ရာ၊ ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်၊ ယုဇနအိမ်ရာအပိုင်း(၁)နှင့်(၂)၊ ကနောင်အိမ်ရာ၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့ နယ်ရှိ ကြီးပွားရေးအိမ်ရာ၊လှိုင်သာ ယာမြို့နယ်ရှိ ရွှေလင်ပန်းအိမ်ရာ၊ ထီးလှိုင်အိမ်ရာ၊ မြောက်ဥက္ကလာပ မြို့နယ် ရှိရွှေပေါက်ကံအိမ်ရာတို့မှ တိုက်ခန်းများဖြစ်ပြီး လူဦးရေ ၅၅ဝဝ ကျော်ကလျှောက်ထားခဲ့ကြ ကာ လူ ၇၂၂ ဦးမှ ပထမအသုတ် အဖြစ် ဝယ်ယူခွင့်ရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)ရှိ အင်းဝအိမ်ရာဝယ်ယူခွင့်ရရှိခဲ့ပြီး ကနဦးပေးသွင်းငွေသွင်းထားပြီး စောင့်ဆိုင်းနေသူ ကိုဇင်က ”ငွေ သွင်းထားတာ လေးလလောက်ရှိ နေပြီ။ အခုထိအခန်းမအပ်သေးဘူး။ ဘဏ်က စက်တင်ဘာ ၁ဝ ရက်ကကနဦးပေးသွင်းငွေအတွက် အထောက်အထားတွေလိုလို့ ဘဏ်ကို လာပါဆိုပြီး မက်ဆေ့ပို့တယ်။ သူတို့လိုအပ်တာတွေအကုန်လုံး ပေးခဲ့ပြီးပြီ။ အဲဒီနောက်ပိုင်း ဘာသံမှမကြားတော့ဘူး။ အခုသူတို့က အိမ်ဈေးတွေ နည်းလို့ဆိုပြီး ဒေါင်းပေးမန့်သွင်းထားတာတွေ ပြန်ထုတ်အောင်စောင့်နေတယ်ဆို တဲ့သတင်းကြားတော့ ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲပေါ့။ ဒါဟာ ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေဘူးဗျာ”ဟုပြောသည်။
လက်ရှိတွင် အဆိုပါ တန်ဖိုးနည်း၊ တန်ဖိုးသင့်အိမ်ရာများနှင့် ပတ်သက်ပြီး တရားဝင်ကြေညာ ခြင်း၊ အသိပေးခြင်းများကို လုပ် ဆောင်နေသည့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန၏ ဖေ့စ်ဘုတ်ခ်စာမျက်နှာ ဖြစ်သော DUHD-YGN တွင်လည်း အဆိုပါတန်ဖိုးနည်း၊ တန်ဖိုးသင့်အိမ်ရာများနှင့်ပတ်သက်သည့် ထုတ်ပြန်ထားချက်များကိုမ တွေ့ရှိတော့သဖြင့် ပြည်သူများ အနေဖြင့် ပိုမိုစိုးရိမ်မှုများ ဖြစ်ပေါ် နေကြခြင်း ဖြစ်သည်။ အိမ်ရာမဲပေါက်ပြည်သူ ကို ကျော်ဇင်(အမည်လွှဲက) ”အရင်က အိမ်ရာနဲ့ပတ်သက်ရင် အဲဒီ DUHD-YGN ကနေ ကြေညာတာလေ။ အခုက အဲဒီဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာက ဘာမှမတွေ့တော့ ဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုပြီး စိုးရိမ် နေချိန်မှာထပ်ပြီး ဒီသတင်းကြား တော့ တော်တော်ဒေါသထွက်မိတယ်”ဟု ပြောသည်။
လက်ရှိတွင် တန်ဖိုးနည်း တန်ဖိုးသင့် အိမ်ရာဝယ်ယူခွင့်ရရှိထားသူများအနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာဘဏ်သို့ စုံစမ်းမေးမြန်းမှုများ ပြု လုပ်နေသော်လည်းတိကျသေချာသည့် အဖြေမရရှိခဲ့ကြကြောင်းသိရသည်။ ထီးလှိုင်ရှင်အိမ်ရာမဲပေါက်ထားသူ ကိုဝင်းအောင်(အမည်လွှဲ)က”လှမ်းစုံစမ်းတယ်။ ဘဏ်ကက လေးတွေက ပြောတယ်။ ကနဦး ပေးသွင်းငွေမှာ ၂ဝ ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်နေလို့တဲ့။ ဗဟိုဘဏ်စည်းမျဉ်း နဲ့ညှိနေတယ်ပြောတာပဲ။ အဲဒါ ကြာနေတယ်လို့ပြောတယ်ဗျာ”ဟု ပြောသည်။ အမည်မဖော်လိုသူ ရွှေလင်ပန်းအိမ်ရာမဲပေါက်ထားသူတစ် ဦးကလည်း ”ကျွန်မတို့စုံစမ်းတော့ အတိုးနှုန်းသက်သာအောင် ဂျပန် ချေးငွေစောင့်နေတာလို့ဆိုပြီး ပြော တယ်။ တိတိကျကျ အဖြေမရဘူး။ ဆက်စောင့်ပေးပါ။ မဲပေါက်ထားတဲ့သူတွေ ဘယ်သူ့ကိုမှ တိုက်ခန်း မပေးသေးဘူးလို့ပြောတယ်” ဟု ပြောသည်။
ယင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဘဏ်လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးထံ ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာ အဆိုပါ ကနဦးပေးသွင်းနှုန်းထားသတ်မှတ်မှုသည် သက်ဆိုင်ရာဘဏ်၏ အစီအစဉ်အတိုင်း ဗဟိုဘဏ်က လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားပြီးသားဖြစ် ကြောင်း ပြောသည်။ ၎င်းက ”ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက် ရင် ကျွန်တော်တို့သိတာက ဗဟိုဘဏ်က သက်ဆိုင်ရာဘဏ်ကို လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားပြီးသား။ ကနဦးပေးသွင်းငွေကို ၂ဝ ရာခိုင်နှုန်း ၃ဝ ရာခိုင်နှုန်းကို သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ်ရဲ့အစီအစဉ်အတိုင်း ခွင့်ပြုထားပါတယ်။ အခုလည်း ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေမှာလည်း သူတို့အစီအစဉ်နဲ့ သူတို့လုပ်ဆောင်နေကြတာ တွေ့ရပါတယ်”ဟု သုံးသပ်ပြောသည်။ လက်ရှိတွင် အဆိုပါအိမ် ရာကို မဲပေါက်ထားပြီး ကနဦး ပေးသွင်းငွေပေးသွင်းကာ စောင့်ဆိုင်းနေကြသူများတွင် အချို့မှာ ရှိသည့်ရွှေထည်များကို ရောင်းချ ပေးသွင်းခဲ့ရခြင်း၊ အချို့မှာ ချေး ငှားပေးသွင်းခဲ့ကြရခြင်း၊ အများစုမှာ အိမ်ငှားနေထိုင်နေကြရသူများ ဖြစ်သဖြင့် နေအိမ်ကိုရရှိရန် အချိန်ကိုက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသော်လည်း အိမ်ရာအခုထိမရရှိကြ သေးသဖြင့် နေထိုင်ရန်အခက်အခဲ ဖြစ်ကြရခြင်းစသည်တို့နှင့် တွေ့ ကြုံခဲ့ကြရကြောင်း သိရသည်။
ရွှေပေါက်ကံ တန်ဖိုးနည်း အိမ်ရာမဲပေါက်ပြည်သူ ဒေါ်သီသီ (အမည်လွှဲ)က ”ကျွန်မတို့က အိမ်ငှားနေကြတာလေ။ မဲကလည်း ပေါက်တယ်။ သူတို့က ဇူလိုင် ၂၅ ရက်နဲ့ ၂၆ ရက်မှာ မဲနှိုက်ဖို့ကြေညာတယ်။ အဆင်ပြေတယ်။ ကျွန်မ တို့ကအိမ်ငှားတာက စက်တင်ဘာမှာ ပြည့်မယ်လေ။ အဲဒီ့လောက်ဆိုရင် အိမ်လည်းရပြီပေါ့ဆိုပြီး ချိန်သားကိုက်လုပ်ထားတာ။ အခုတော့ အိမ်ငှားရတာဒုက္ခရောက်ပြီလေ။ ရှိတဲ့ပိုက်ဆံကလည်း ကနဦးပေးသွင်းငွေပေးလိုက်တော့ အိမ်ငှားဖို့က တစ်နှစ်စာလောက်ပေးဖို့ခက်ခဲသွားရော”ဟု ပြောသည်။ ယင်းသို့ မျိုးစုံထွက်ပေါ်နေသည့်ကောလာဟလများနှင့် ပတ်သက်၍ မြို့ပြနှင့် အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနဒုတိယ ညွှန်ကြားရေး မှူးချုပ် ဦးမြင့်နိုင်ထံ နိုဝင်ဘာ ၂၃ ရက်က ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ရာ ”ကျွန်တော် ဘယ်မီဒီယာမှ ဖုန်းအင်တာဗျူးမဖြေပါဘူး။ သိချင်ရင် ရုံးကိုလာမေးပါ။ သို့ပေမဲ့ အခုလက်ရှိလာမေးလို့လည်း မရ သေးပါဘူး။ ကျွန်တော် အစည်းအဝေးဝင်နေပါတယ်။ ဒီရက်ပိုင်း လည်းလာမေးလို့အဆင်မပြေ သေးပါဘူး ကျွန်တော် ခရီးသွားရ မှာမို့ပါ။ ဒီဇင်ဘာလဆန်းပိုင်း လောက်မှပဲရမယ်ထင်တယ်။ ပြီး တော့ ဒီကိစ္စကိုရန်ကုန်တိုင်း အိမ်ရာ ရောင်းချရေးကော်မတီကိုမေးလိုက်ပါ။ သူတို့လည်းသိပါတယ်”ဟုသာ ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါအိမ်ရာများနေထိုင်ခွင့်ထိုသို့ကြန့်ကြာမှုအပေါ် ပြည်သူသို့ တစ်စုံတစ်ရာ ချပြအသိပေး ခြင်းမရှိထားသလို ယင်းအချက်သည် ပြည်သူများအနေဖြင့် အယုံအကြည်မဲ့စေကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ပြည်သူ့အိမ်ရာ ရောင်းချရေးကော်မတီဝင် တိုင်း ဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးညီညီက ပြောသည်။ ”ဒါဘာကြောင့်ကြာနေလဲဆိုတာ ပြည်သူတွေကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိအောင်တော့ ကျွန် တော်တို့ အမြန်ဆုံးချပြဖို့လိုတာ ပေါ့။ အဲ့ဒီအတွက်ကိုလည်း ကျွန် တော်တို့ ဥက္ကဋ္ဌကိုရော သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူတွေကိုပါ အ ကြောင်းကြားပြီးတော့ အစည်းအဝေးအမြန်ဆုံးလုပ်နိုင်ဖို့လုပ်သွားပါ့မယ်။ အဲဒီအစည်းအဝေး ကမှတစ်ဆင့် ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူကို အသိပေးချပြနိုင်တဲ့ဆုံးဖြတ် ချက်တစ်ခုကိုချပြနိုင်အောင် ကျွန် တော်တို့ ကြိုးစားသွားပါ့မယ်ဗျ။ ပြီးတော့လည်း ဘဏ်တိုးနှုန်းက အနည်းငယ်ထပ်တက်လာနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိနေတာမို့လည်း အဲဒီလိုမျိုးမဖြစ်အောင် ပြည်သူကို ချပြထားတဲ့အတိုးနှုန်းအတိုင်းဖြစ် အောင်လို့ပဲ ဆောင်ရွက်သွားပါ့မယ်”ဟု တိုင်းဒေသကြီးလွှတ် တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးညီညီက ပြောသည်။ သို့သော် ယင်းအိမ်ရာများ နေထိုင်ခွင့်ကိုမူ မည်သည့်အချိန်တွင် ခွင့်ပြုပေးသွားမည်ဆိုသည်ကိုမူ မသိရှိရသေးပေ။